सीडीएमए बन्द गर्दै टेलिकम - Rajmarga
सीडीएमए बन्द गर्दै टेलिकम
ग्रामीण क्षेत्र लक्षित नेपाल टेलिकमको कोड डिभिजन मल्टिपल एक्सेस (सीडीएमए) सेवा बन्द हुने भएको छ । विश्वव्यापी रूपमै सीडीएमए प्रविधिको विकास रोकिएकाले यसको सेवा बन्द गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको टेलिकमले जनाएको छ । करिब १५ वर्ष पुरानो उक्त सेवा बन्द गरेर त्यसका हाल कायम ग्राहकलाई फोरजीमा रूपान्तरण गर्ने कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।
बुधबार कम्पनीको१६औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले कम्पनीको वायरलेस सेवामा एकरूपता ल्याउने उद्देश्यसहित यो सेवा बन्द गर्ने तयारी भएको जानकारी दिए । उनकाअनुसार आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सेवा बन्द गरेर त्यसका ग्राहकलाई पछिल्लो पुस्ताको फोरजी ग्राहकका रूपमा रूपान्तरण गरिने छ ।
टेलिकमले सन् २००५ मा पहिलोपटक सीडीएमए सेवाको ‘सफ्ट लन्च’ गरेको थियो । त्यसअघि यो सेवामा नेपालमै पहिलोपटक युनाइटेड टेलिकम (यूटीएल)ले सन् २००२ मा सुरु गरेको थियो । हाल प्रचलनमा रहेको जीएसएम मोबाइल सेवाको पहुँच विस्तार नभएका स्थानमा तत्काल नै सञ्चार सम्पर्क स्थापित गराउन सीडीएमए सेवा त्यतिबेला प्रभावकारी बनेको थियो ।
सीडीएमका लागि तोकिएको फ्रिक्वेन्सी धेरै भागमा फैलाउन सकिने भएकाले नेपालमा दूरसञ्चार पहुँच विस्तारमा यसको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो । दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार अहिले नेपाल टेलिकमका करिब १७ लाख सीडीएमए प्रयोगकर्ता छन् । टेलिकमले आठ सय ५० मेगाहर्ज ब्यान्डमा छ मेगाहर्ज (सेयर्ड) फ्रिक्वेन्सीमार्फत सीडीएमए सेवा उपलब्ध गराइरहेको छ ।
पछिल्लो समय जीएसएम प्रविधिको देशका अधिकांश ठाउँमा पहुँच पुगिसकेकाले सीडीएमएका लागि प्रयोग भएको फ्रिक्वेन्सीसमेत बचत हुने अधिकारीले बताए । प्रविधिगत रूपमा विश्वव्यापीस्तरमै सीडीएमए सेवाको विकास क्रम रोकिएकाले नियामक समेतको सहकार्यमा यो सेवालाई रूपान्तरणसहित बन्द गर्ने कार्यक्रम कम्पनीले ल्याएको हो ।
टेलिकमले वार्षिकोत्सवका अवसरमा देशका सबै जिल्लाका सदरमुकाममा फोरजी सेवा पुगेको घोषणा पनि गरेको छ । देशैभर एफटीटीएच सेवा विस्तार गर्ने र त्यसैमार्फत इन्टरनेटमा आधारित टेलिभिजन सेवा पनि उपलब्ध गराउनेतर्फ काम भइरहेको टेलिकमले जनाएको छ । विगत एक वर्षमा मात्रै कम्पनीका सक्रिय ग्राहक सङ्ख्या करिब १० लाखले बढेको र बजार हिस्सा समग्रमा ५५ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
कात्तिक महिनासम्मको तथ्यांकअनुसार कम्पनीका कुल ग्राहक दुई करोड ३६ लाख पुगेका छन् । त्यस्तै कम्पनीको डेटा प्रयोगकर्ता सो महिनासम्म एक करोड ४६ लाख रहेको पनि टेलिकमले जनाएको छ । वार्षिकोत्सवका अवसरमा केरुङ नाकातर्फ सञ्चालित टेलिकमको लिंकलाई तातोपानी नाकामा पनि पुनः सञ्चालन गर्ने, कम्पनीको प्रशासनिक संरचनालाई संघीय स्वरूपमा लैजानेजस्ता काम अगाडि बढिरहेको पनि जानकारी दिइएको छ । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
Previous Previous post: घटेनन् सीपबिना नै विदेश जाने महिला
Next Next post: ‘सिजनल फ्लु’बाट बाजुरामा दुईको ज्यान गयो, पूरै गाउँ संक्रमणमा
आगो दन्किरहन्छ र फलामको वर्षा भइरहने अद्भूत ग्रह हो, Wasp-76b
मोबाइल हरायो ? निवेदन दिनुहोस्, सात दिनमा हात लाग्छ
यात्रु ओसारे अब टुटल पठाओमाथि कारबाही
देशकै ठूलो सौर्य प्लान्ट वैशाखदेखि विद्धुत बल्ने
कसरी भयो प्रधानमन्त्रीको ‘डोमेन’ दुरुपयोग ?
वाईफाई स्लो भएर काम गरेन? यसरी बढाउनुहोस् स्पिड
यस्तो छ ५०० किलो सुनबाट तयार गरिएको संसारकै महँगो कार, जसको मुल्य ८०३ करोड
तपाईलाई थाहा छ सबैभन्दा बढी हेरिने तस्वीर कुन हो ?
जिन सम्पादनको दाबी गर्ने चिनियाँ वैज्ञानिकको भनाइ के छ?
सामाजिक सञ्जाललाई करको दायरामा ल्याऊन महालेखाको माग
आज चैते दशैँ, घर घरमा नवदुर्गा भगवतीको पूजा आराधना गरी मनाइँदै
साउदी राजाको निर्देशन- सबै विदेशीलाई निशुल्क उपचार
विपन्न ६० परिवारलाई खाद्यान्न वितरण
कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या ४२ हजार नाघ्यो
आज बुधबार, निकै राम्रो छ यी राशिको भाग्य, हेर्नुहोस् राशिफल
विदेशबाट फर्किएका नमूना सङ्कलान शुरु, १४६ निगरानीमा